San Marino wararka safarka | eTurboNews
Bogga ugu weyn » Wararka Booqashada Caalamiga ah » San Marino wararka safarka
Qeybta - San Marino wararka safarka
San Marino safarka & wararka dalxiiska ee socotada iyo xirfadlayaasha safarka. Wararkii ugu dambeeyay ee safarka iyo dalxiiska ee San Marino. Wararkii ugu dambeeyay ee amniga, hudheelada, dalxiisyada, soojiidashada, dalxiisyada iyo gaadiidka San Marino. Macluumaadka Safarka San Marino.
San Marino waa microstate buuraley ah oo ku wareegsan waqooyiga-bartamaha Talyaaniga. Jumhuuriyadaha adduunka ugu da'da weyn, waxay ku haysaa in badan oo ka mid ah qaab dhismeedkeedii taariikhiga ahaa. Dhinaca dhaadhaca ee Monte Titano waxaa ku fadhiya caasimadda, sidoo kale loo yaqaan San Marino, oo caan ku ah jirkeedii hore ee darbi jiifka ah iyo jidadka yar yar ee dhagaxa ah. Saddexda Towers, oo ah qalcado u eg qalcado la wadaago qarnigii 11aad, waxay fadhiyaan dusha sare ee Titano deriskeeda.
San Marino guul weyn ayuu ka gaaray dhacdadii ATM
Saraakiisha Jamhuuriyadda San Marino waxay muujiyeen soo jiidashada muwaadiniinta muhiimka ah iyo qorshooyinka ...
Fadeexadda Tallaalka EU waxay leedahay saddex guuleyste oo waaweyn: San Marino, Russia ...
Jamhuuriyadda San Marino waxay uun noqotay ciyaartoy caalami ah oo ka tirsan siyaasadda reer Galbeedka Ruushka, waxayna ku saabsan tahay ...
Maanta waa maalintii aad booqan laheyd San Marino: Iiddii San ...
Waqtiga ugufiican ee la booqdo San Marino waa maanta. 3-da Sebtember sanad kasta, dadka yaryarkan ...
WAQTIGA - 'San Marino Story' wuxuu noqonayaa ...
San Marino wuxuu ku biirayaa hindisaha Europe-China Light Bridge